Home Wararka Midowga Musharaxiinta oo u muuqada kuwa kala qeybsamay & qaar u galay...
Midowga Musharaxiinta oo u muuqada kuwa kala qeybsamay & qaar u galay Fahad
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa ku kala qeybsamay shirkii xalay ka dhacay Mudqisho oo lagu taageerayo Ra’iisul Wasaare Rooble, loogana soo horjeedo isku daygii afgambi ee lagu doonayay in Xafiiskiisa lagula wareego.
Munaasabadii xalay ka dhacday Hotel Afrik ayaa waxaa ka soo qeyb galay xubno ka tirsan Midowga Musharaxiinta oo ay ka mid yihiin Madaxweynihii hore Xasan Sheekh, C/raxmaan C/shakuur iyo C/kariin Guuleed.
Waxaa shirkaas ka maqnaa oo aan soo xaadirin Madaxweynihii hore ahna Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Sheekh Shariif, Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre iyo xubno kale. Kheyre iyo Shiikh Sharif oo rajo kaga jirtaa in Fahad Yasin uuka dhiganayo Qorashaha labaad mar hadii Farmaajo Fashilmo.
Labaadaan nin (Kheyre iyo Sh. Sharif) oo aan lahayn mamda ama aragti siyaasadeed ayaa loo adeegsaday in lagu kala jabiyo Midiwga Musharaxiinta.
Previous articleMidowga Africa oo muujiyay inay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka Rooble & Farmaajo
Next articleTurkish, Somali Foreign Ministers discuss bilateral ties
Maraykanka ee sheegay in uu Jubbaland ka caawinayo la dagaalanka Al...